भाते जाँडलाई खिर सम्झेर खाने देखी र बालक हराएको सुचना जारी गर्नुपरेका मेरा साउने संक्रान्तिका हर्कतहरु-Brtnepal.com
साल र महिना याद भए पनि गतेको हकमा सधै झुक्कीरहने मेरो बानीलाई एकाबिहानै धेरैका फेसबुकका भित्तामा भरिएका स्ट्याटसले सम्झाउँछ कुन पर्व, कुन दिवस ? अझ सजिलो गरी । आज साउन १ गते रहेछ । यहि साउन १ गते अर्थात साउने संक्रान्ति सानो छँदा ३ महिना पहिले नै थाहा हुन्थ्यो । असारको १५ गते कट्न थालेपछि मेरो बाल मस्तिष्कमा साउने संक्रान्तिमा जम्मा गर्नुपर्ने सरसामानको ठूलै लिष्ट तयार हुन्थ्यो ।
यता दिउँसै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कृष्णको मम्मीलाई फोन आएछ । तपाईको छोरा हामीसँगै छ, अरु दुईवटा बच्चा रोक्न नसकेर कता गए, थाहा भएन । कृष्णले एउटाको नाम सुषमा भन्दैछ भनेछन् । सुषमा भन्नासाथ मेनुका आन्टि दगुर्दै हाम्रो कोठामा आएर तपाईको छोरी खै भनेर सोद्धा ममिले खै कता गई बिहानै बाट आएकी छैन भात नखाई हिडेकी खोज्ज पनि कता जाने र ? आउली नी बेलुका सम्म भन्नु भएछ । बिचरा दिनदिनको मेरो डुलुवा बानिले ममीलाई म बानेश्वर पुगेको कुरा थाहै भएन । मेनुका आन्टीले बेलिबिस्तार लगाएपछि खैला बैला सुरु भएर रेडियो नेपालमा मेरो नाम हुलिया सहित बालिका हराएको भनेर तुरुन्तै दर्ता गरिएछ ।
जति गाली गरेपनि बहिनीहरु मुख फर्काउन सक्दैनथे, त्यसमा पनि म साह्रै मातेको थिएं, केहि बोल्यो की पिटीदिन्थें बहिनीहरुलाई । यो बानी लागेर हो की क्याहो अहिले ब्याचलर सकेर मास्टर्स सुरु गरेका मेरा दुईवटै बहिनी मेरो कुरामा होमा हो मात्र मिलाउँछन्, मुख फर्काउने र रिसाउने कहिल्यै गर्दैनन आज पनि ।
बहिनीहरु रुदैं तिग्रे कुट्थे, तिग्रेमा अमीलो, तेल, नुन, हाल्थें । एकजना काकीले तिग्रेमा परेबाको बिस्ट (परेबाको दिसा) हाल्यो भने धेरै रातो हुन्छ भनेपछि परेवा पाल्नेको घरमा बिस्ट माग्न पुग्थें ।
Published on July 16, 2017 at 1:09 am